Kukomborerwa kukuru kwevanhu vaMwari (1-12)
Mabiko aJehovha ewaini yakanaka kwazvo (6)
Rufu runobviswa (8)
25 Haiwa Jehovha, muri Mwari wangu. Ndinokukudzai, ndinorumbidza zita renyu,Nekuti makaita zvinhu zvinoshamisa;+Makasarudza zvinhu izvi kare,+Mukutendeka+ nemukuvimbika. 2 Nekuti makaita kuti guta rive murwi wematombo,Uye kuti guta rakakomberedzwa nemasvingo rive matongo. Shongwe yemunhu wekune imwe nyika haisisiri guta;Haichazombovakwizve. 3 Ndokusaka muchakudzwa nerudzi rune simba;Guta remarudzi anodzvinyirira richakutyai.+ 4 Nekuti mava nhare* kune akaderera,Nhare kumurombo pakutambudzika kwake,+Pekuhwanda mvura ine simba,Nemumvuri pakupisa.+ Dutu revanodzvinyirira parinenge rakaita semvura inonaya ichirovera pamadziro nesimba, 5 Parinenge rakaita sekupisa kunenge kuri munyika yakaoma,Imi munokunda ruzha rwevatorwa. Sekukurirwa kunoita kupisa nemumvuri wegore,Rwiyo rwevanodzvinyirira runonyaradzwa. 6 Mugomo iri,+ Jehovha wemauto achaitira marudzi eseMabiko emachikichori ezvekudya,+Mabiko ewaini yakanaka kwazvo,*Emachikichori azere nemwongo,Ewaini yakanaka kwazvo, yakasvinwa. 7 Mugomo iri achaparadza* chifukidziro chakafukidza marudzi ese,Nejira rakarukirirwa richivhara marudzi ese. 8 Achaparadza rufu zvachose,+Uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvese.+ Achabvisa kuzvidzwa kwevanhu vake panyika yese,Nekuti Jehovha pachake azvitaura. 9 Pazuva iroro vachati: “Onai! Uyu ndiye Mwari wedu!+ Takatarisira kwaari,+Uye iye achatiponesa.+ Uyu ndiye Jehovha! Takatarisira kwaari. Ngatifarei, tifarire ruponeso rwake chaizvo.”+ 10 Nekuti ruoko rwaJehovha ruchauya rwogara pagomo iri,+Uye Moabhi ichatsikwa-tsikwa munzvimbo yayo+Semashanga anotsikwa-tsikwa kusvikira ava murwi wemupfudze. 11 Achatambanudza maoko ake achiapinza mairiSekutambanudza maoko kunoitwa neanoshambira kuti ashambire,Uye achaderedza kuzvikudza kwayo+Paachafambisa maoko ake neunyanzvi. 12 Uye guta rakakomberedzwa nemasvingo, rine masvingo akakwirira ekudzivirira,Acharidonhedza;Achariwisira pasi, muguruva chaimo.
^ Kana kuti “ewaini yakasiiwa iri mumasese.”
^ ChiHeb., “achamedza.”